Falanqaynta Koorsada Shaxda - Geofumadas
Ogast, 2011 Leisure / waxyi, topografia
Saddex maalmood oo shaqo kadib, waxaan halkan sii daayaa sawirro yar koorsada barashada oo leh Saldhigga Wadarta.
Sida Aristotle sheegay, nin caaqil ah marnaba ma sheegayo wax kasta oo uu ka fikiro, laakiin had iyo jeer wuxuu u maleynayaa wax kasta oo uu sheegayo ...
Waxaan haystaa daqiiqado 45 ka fakaraya sida loo waydiiyo su'aal ku saabsan isticmaalka xisaabiyaha sayniska.
"Xaqiijinta xaqiiqda maaha runta"
Henri Matisse, oo ah wax la tarjumay oo ku dhowaadba ka hor muuqaalka image.
Haddii aad lumiso taleefankaaga oo kharashka US $ 300 ka heli karto, sababtoo ah waxay leedahay gps isku dhafan.
Miyaadan u malaynaynin in aad dhigayso saldhiga guud ee u dhigma US $ 8,000?
... ha i iloobin aniga ...
Ma ahan shil aad u badan.
Waxaan jeclaan lahaa inaan wadahadal la galo sawiradaas, laakiin waxaan ka tagi doonaa maskaxda.
Waa hagaag, ma ahan wax walwal ah koorsada.
Post Previous«Previous Genius iyo Ingenuity
Post Next Toddobaadka cilmi-baadhistaNext »
8 Jawaab ah "Kombiyuutarada" ee "Surveying Surveying"
Noo sheeg waddada aad tahay
enrique gongora isagu wuxuu leeyahay:
intee ayaa lexaad u kaca koorsada shaxda?
carlos gustavo castro isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ubaahanahay in aan baro sawir-qaad online, waxaan rabaa inaan haysto kaarka xirfaddayda, waxaan u shaqeynayey sanado 15 oo ah mawduuc
hello, kooxda leica ayaa la maareynayaa, laakiin mararka qaarkood waxaan ku adkaahay inaan soo dejiyo xogta aan rajeynayo inaan barnaamijka u mahadnaqo
dhoobo isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa inaan qaato koorsadaada iyo sidoo kale civil3da loo qaaday si aad u sarreeya ee aan ka soo jeedo Peru waxaanan rajeynayaa in aan joogteeyo isgaadhsiin joogto ah sidaa daraadeed waxaad i siisaa talooyin qaar
Waxaa jiri doona xoogaa fursad ah inaad ku qabato Guatemala, waan xiiseynayaa taas. E-maylkaygu waa pgsilvestre@gmail.com.
Waxay ku jiri doontaa Honduras. Suurtogal mar dambe El Salvador.
JORGE DARIO HOYOS VALENCIA isagu wuxuu leeyahay:
WAXAAN KA HELI KARAA KAALMADA, FADLAN SAXIIX TAARIIKHDA TAARIIKHDA DIB U EEGIDDA KOOXAHA, MACLUUMAADKA, DHIBAATOOYINKA, DHAQAALKA IYO COST.